Fangatahana ampanaovin’ny Papa ho an’ny volana Marsa 2019 » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Tsy misy afa-manasa tànana hoy ny Papa Fransoa
Hafatry ny Papa ho an’ny karemy 2019 »
Fangatahana ampanaovin’ny Papa ho an’ny volana Marsa 2019
« Mba ho tsapan’ny kristianina, indrindra ireo enjehina, fa eo akaikin’i Kristy mandrakariva izy ireo ary mba ho voahaja ny zony ».
Ny Batemy no maha kristianina ny olona iray ka nandraisany ny fanosorana ho mpaminany sy mpisorona manjaka ao amin’ny Eglizy. Tena zanak’Andriamanitra tokoa izy amin’izany satria mitondra ny anaran’i Kristy. Mpitondra ny Tenin’Andriamanitra, mpitory ny Vaovao Mahafaly eo anivon’ny mpiara-belona aminy, izany hoe, ao amin’ny fianakaviana, ny fiaraha-monina sy ny firenena ary ny Eglizy. Amin’ny seha-piainana rehetra mihitsy no iainana ny maha kristianina na amin’ny mora, na amin’ny sarotra.
Io antson’i Kristy io no maniraka ny kristianina hitory ny Evanjely sy hijoro ho vavolombelon’ny finoany an’i Kristy izay niantso azy. Mila fahavononana sy fandavan-tena ho an’i Kristy eo amin’ny fiainana manontolo ny fijoroana ho kristianina, izany hoe, ilay Batemy noraisina. Hoy manko Jesoa raha niantso ny mpianany : « Raha misy te hanaraka ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazofijaliany ka hanaraka ahy » (Mt 16, 24).
Efa tsinjon’i Kristy sahady io fiainana sy lalan-kodiavin’ny Egliziny io. Tsy maintsy handalo fanenjehana sy zava-tsarotra isan-karazany. Ary dia Izy mihitsy aza moa no nisantatra izany mba hahatanterahan’ny famonjena sy ny iraka nanirahan’ny Ray azy. Hatrany am-piandohany ny Eglizy dia tsy nitsahatra nisedra sy niaritra zava-tsarotra maro. Saingy ny finoana sy ny herim-pon’ireo olon’ny Fiangonana kosa dia vao mainka nihamafy orina noho ny asan’ny Fanahy Masina tao aminy. Ny tantaram-piainan’ireo Martiry sy ireo olomasin’ny Eglizy no anisan’ny vavolombelona manambara ny fijoroan’ny kristianina sy ny fahaveloman’ny Eglizy mandraka ankehitriny.
Amin’izao vanim-potoan’ny fandrosoana sy ny fanatontoloana iainantsika izao, dia mbola fahita hatraiza hatraiza io fanenjehana ny kristianina io, na mivantana izany na ankolaka. Ary vao mainka aza toa mahazo vahana amin’ny faritra maro sy ny Firenena sasany izany. Ny Fampianarana sosialin’ny Fiangonana dia manantitrantitra ny amin’ny tokony hamelana malalaka ny olom-pirenena tsirairay hivavaka araka ny finoany sy ny antokom-pivavahana misy azy avy, fa zo ananany izany. Tsy araka izany anefa ny zava-misy iainana ankehitriny fa iharan’ny faneriterena sy ny fanenjehana amin’ny fomba samihafa ny mpivavaka, indrindra fa ny kristianina.
Eo anatrehan’izay indrindra no tokony hahatsiarovan’ny kristianina fa miara-dalana sy eo aminy mandrakariva i Kristy. Araka ny tenin’i Md Paoly hoe :. « Iza àry no hahasaraka antsika amin’ny fitiavana an’i Kristy ? Fahoriana va, sa fahaterena, sa fanenjehana, sa hanoanana, sa tsy fananana inoninona, sa loza, sa sabatra ? » (Rm 6, 35). « Na ilaozan’ny olona aza aho, i Kristy mitsangana eo anilako ary mankahery ahy » (2 Tim 4, 16-17).
Izany indrindra no anentanan’ny Papa Ray Masina antsika amin’ny fanolorana ny andro mandritra ity volana ity, ny amin’ny tokony hahatsapantsika lalandava ny maha kristianina mitondra an’i Kristy eo amin’ny fiainantsika. Hahatsiaro mandrakariva fa tsy misaraka amin’ny fiainantsika i Kristy, na amin’ny mora na amin’ny sarotra, na inona na inona ataontsika. Eo foana i Kristy.
Tags: Hafatry ny Papa, TPPM
Hafatry ny Papa Fransoa : Ny Fiadanana, lalan’ny fanantenana